Wakiilka Qaramada Midoobay ee Somalia oo Somalida Minnesota La Hadlay.
“Xiriir ka dhexeeya Ingiriiska iyo Puntland oo aan ka aheyn Col. C/llahi Yusuf oo baaritaan caafimaad London u taga oo aan ogahay ma jiro”
Soomaalidaii kasoo qayb gashay Kulanka
Uqeybasanaha gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u magacaabay Somalia, Danjire Winston Tubman ayaa maalintii Jimcihii 21-ka May ka hadlay Jaamacadda Minnesota. Kulankan oo eey si wada jir ah u soo qabanqaabiyeen xarunta xuquuqda aadanaha ee Jaamacadda Minnesota iyo Machadka Hogaaminta Caalamiga ah ee Minnesota ayaaneey Soomaali badani ka soo qeyb galin, ogeysiis xuma awgeed. Danjiraha oo u dhashay wadanka Liberia ee galbeedka Africa ayaa jagooyin kala duwan ka soo qabtay dowladihii hore ee wadankiisa, isla markaana Qaramada Midoobay uga soo shaqeeyey; Ciraaq, Kuwait, Yuguslaavia, Croatia iyo Somalia. Mr. Tubman ayaa ka hadlay dhinacyo badan oo eey kamid yihiin: shirka Somalida uga socda Kenya, qorshaha eey Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ka leedahay Somalia, danaha durugsan ee dowladaha dariska la ah Somalia iyo wuxuu ugu yeero “Halkii Isku-day” (One Shot) ee Somalia hore loo siiyey. Wuxuu kaloo ifiyey sii jeedka eey dowladda Mareykanku dhabarka soo xijisay arrimaha Somalia, oo buu yiri “horseed u ah ismaahinta beesha caalamka inteeda kale”. Waxaa lagu soo gunaanaday su’aalo loo jeediyey Danjiraha.
Danjiraha, Mr. Tubman ayaa markii ugu horeysay Somalia tagay sanadkii 1993-dii, kadib markii la gowracay 27 Xubnood oo kamid ahaa ciidamadii Pakistan ee ku jiray Isbaheysigii uu Mareykanku hor kacayey. Wuxuu masuul ka ahaa guddi loo xilsaaray ineey dhacdadaas soo baaraan. Badanaa marka uu hadlayo, wuxuu arrinta Somalia jecel yahay inuu arrinta wadankiisa hooyo ee Liberia ku tusaaleeyo, amaba uu-ba u barbar dhigo.
Markii uu ka hadlayey xaalka uu ku sugan yahay shirka Somalida ugu socda Kenya, wuxuu sheegay ineey Qaramada Midoobay sii wadi doonto dadaalkeeda. Ha yeeshee, wuxuu ka digay in hadii aan la helin feejignaanta ama u dhuun daloolida Mareykanka ee arrinkan, inuusan shirkani ahaan doonin mid miro dhal badan. Wuxuu si qurux badan isugu xiray, isla markaana dadweynihii meesha isugu yimid xiiso gooni ah ku abuuray, in go’aamada ka soo baxa Golaha Ammaanku eey yihiin kuwa eey badanaa maslaxad gooni ah ugu jirto xubnaha joogtada ka ah ee shanta ah. Mareykan-kuba ha ugu tun-buurnaadee. Isagoo taa sii wadana wuxuu cadeeyey inuu jiro dadaal eey Shiinuhu ku doonayaan in arrinta Somalia goluhu eego, wallow uu misana sheegay in Mareykanku uu laf dhabar u ahaan doono wareegto walba oo goluhu ku tallaabsado.
Danjiruhu wuxuu quud dareeyn ka muujiyey hogaamiye kooxeedyada Somalida. “Meel kasta oo aan arrinka Somalia ku soo hadal qaado waxaa leygu yiraahdaa Somalidu heshiis marabaan. Anigana waxaan ogahay in shacabka Somaliyeed eey yihiin kuwa ugu walbahaarka badan arrinka wadankooda”. Mr. Tubman wuxuu sidoo kale aad u masuugay carada (Xanaaqa) eey iska caroonayaan qaar badan oo kamid ah hogaamiye kooxeedyada Somalida. Deedna la soo cara calinayo. Wuxuu ka digay in beesha caalamku muujineyso dareen “daal” iyo “Karaahsi” ah oo ku beegan arrinka Somalida.
Mareykanka iyo Arrinka Somalia
Jariidada National Post (canada) oo May 21, 2004 Qoraal dheer ka qortay Marxuum Maxamed Siyaad Barre iyo Soomaaliya: Profile of Mohamed Siad Barre
National Post : ... It was not until 1886, however, that the British gained control over northern Somalia through treaties with various Somali chiefs who were guaranteed British ... Click
Xaruntii Dhexe ee X.H.K.S (Sawirka oo weyn)
Akhri: Country Study and Guide
Akhri: Somalia: Country Study...
Akhri: Somalia: 1800-1999
Wuxuu si gooni ah iigu sheegay, dadweynahana uu u cadeeyey, una muuqatay inuu muhimad gooni ah siinayo Danjiruhu, waxa uu ugu yeeray “Halkii Isku-day” oo laga wado howl galkii dhicisoobay ee Rajo Soo Celinta ee Mareykanku ka Sayid-Caleynayey ee 1993-dii. Wuxuu yiri “Mar Alla iyo marka aan tago wasaarada arrimaha dibada ee Mareykanka, saraakiishu wexeey ii sheegaan ineeysan Somalia kuba jirin miisaaniyada dhaqaaleed ee Mareykanka”. Isagoo hadalkiisii sii watana wuxuu raaciyey “Mareykanku wuxuu mashquul aan caadi aheyn ku yahay la dagaalanka argagixisada. Diiradana ma saarayaan cidii aan Argagixiso ama Kheyraad Dabiici ah oo loogu xisho laheyn”. Si loo helo feejignaanta Mareynkankana, Danjiruhu wuxuu Somalida Mareykanka, gaar ahaan kuwa Minnesota ku booriyey ineey xildhibaanada gobolkooda laga soo doorto ee ku jira aqalka odayaasha oo kale saaraan cadaadis dheeraad ah. Gaar ahaan waqtiga doorashooyinka. Wuxuu jaaliyadda aad ugu tiritirsiiyey ineey arrinkaas iska baheystaan.
Dowladaha Darika Ah
Dhanka dowladaha dariska la ah Somalia, Mr. Tubman wuxuu ku soo koobay ineey jiraan “dano durugsan” oo eey dowladahaasu ka leeyihiin arrinka Somalia. Kuwaasoo mararka qaar is jiiraya, iyaga ruxooda. Taasoo buu yiri “ Cakiri karta geedi socodka nabadda Somalia”. Wuxuu kaloo carrabka ku dhuftay in Geeska Africa uusan laheyn quwad sida Nigeria oo kale ah, oo muquunin karta xurgufaha ka aloosan gobolka. Wuxuu u barbar dhigay sida eey Nigeria u fara galisay wadankiisa iyo Siiraalyoon-ba.
Dadweynuhu su’aalo badan oo xiiso leh ayeey heybinayeen Danjiraha. Sida lagu yaqaano siyaasiyiinta-na, qaarkood si qayaxan ugama aanuu jawaabin.
Mar wax laga weydiiyey waxa eey Qaramada Midoobay ka qabatay cunaqabateyntii hubka ee Somalia, wuxuu cadeeyey in run ahaantii eeysan wax weyn ka qaban. Ha yeeshee eey jiraan dadaallo looga gol leeyahay sidii loo ogaan lahaa cidda Somalia hubka geeysa. Iyo waliba, in dhowr guddi loo magacaabay arrinkaas, laakiin eey qoraalladii eey soo gudbiyeen si gooni ah fara ugu fiiqeyn wadamada hubka geeya Somalia, “Culeysyo siyaasadeed awgeed” ayuu kusoo afjaray.
Mar la weydiiyey waxa eey dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanku ka qabaan gobollo goosiga iyo gooni isu taagida Somaliland iyo Puntland, wuxuu ku nuuxnuuxsaday inuu jiro cadaadis eey sheegteen saraakiil ka tirsan wasaarada arrimaha dibadda Mareykanka, oo isaga weydiiyeen sida ku haboon ee arrinkan loola tacaali karo. Wuxuu intaas raaciyey in saraakiishaasu dareensan yihiin in gobolkan arrinsaday (Somaliland) eey wuxuun arrinkiisa ka qabtaan. Ha yeeshee wuxuu Danjiruhu sheegay inuu isagu shaqsiyan uga digay saraakiishaas ineey dhabar jab qaab daran ku noqon doonto geedi socodka nabadda, hadii Mareykanku soo hadal qaado goosi-doonka Somaliland. Si kastaba ha ahaatee, Danjiruhu wuxuu sheegay in dowladda Ingiriisku ka fikireyso arrinka Somaliland, eeyna ugu muuqato in dhulkii eey gumeysteen wuxuun loo qabto. Walow eey booqashadii Riyale ee kal hore ku sifaayeen “mid aan rasmi aheyn” buu yiri.
Dhanka Puntland, Danjiruhu wuxuu si qosol ku dheehan yahay u yiri “Ma garanayo xiriir ka dhexeeya Ingiriiska iyo Puntland oo aan ka aheyn in C/llahi Yusuf uu dhaqtar ku leeyahay London”. Hadalkaas ayaa ka qosliyey dadweynihii meesha isugu yimid.
Gunaanadkii, ka soo qeyb galayaal badan oo aan wareystay ayaa ii sheegay ineey guud ahaan la dhacsanayaan hadalka Danjiraha, wallow eey ka muuqatay inuu arrinka Liberia siinayo muhimad dheeraad ah. Taas oo dadka qaar ugu-ba muuqatay ineey shaqada Danjiraha ee Somalia naafeyneyso.